အမြွာညီ အစ်ကိုနှစ်ယောက် အတွက် မွေးနေ့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေး လိုက်တဲ့ သဇင်ထူး မြင့် – Shwewiki.com
ပရိသတ်ရဲ့ အချစ်တော် သဇင်ထူးမြင့်နဲ့ အမြဲတတွဲတွဲတွေ့မြင်ရလေ့ရှိတဲ့ အမြွာညီအစ်ကို နှစ်ယောက် ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးသိကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်နော်။ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ သဇင်ထူးမြင့် တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်နဲ့ အတူ Dream Do Create Page လေးဖွင့်ပြီး ပျော်စရာဂိမ်း အစီအစဉ်တွေနဲ့ အခြားဗွီဒီယိုလေးတွေ ရိုက်ကူးမျှဝေလျက်ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Twin Guys II It’s my Lifestyle Page လေးမှာလည်း ပညာပေးဗွီဒီယို လေးတွေ ရိုက်ကူးကာ မျှဝေလျက်ရှိပြီး အားပေးသူ ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရရှိထားပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ အမြွာညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးဖြစ်ပြီး သဲလေး ကတော့ ” Happy Birthday ကိုကြီးတို့ အများကြီး အောင်မြင်ပါစေ…ဝိတ်လည်း ချမနေပါနဲ့…. အတူတူဝ ကြတာပေါ့…… ညီမလေး ဆုတောင်းပေးတယ်နော် Happy Birthday … ကိုကြီးတို့ အများကြီး အောင်မြင်ပါစေ…ဝိတ်လည်း ချမနေပါနဲ့… အတူတူဝကြတာ ပေါ့….ညီမလေးဆုတောင်းပေးတယ်နော် ” ဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်း ပေးခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
ဒီနေ့ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ရက်လေးကစပြီး ကိုယ်ဖန်တီးချပြချင်တဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို စိတ်ရှိတိုင်း လုပ်နိုင်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှု အခိုင်အမာရရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆယ်လီကမ္ဘာမှ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
အမွှာညီ အဈကိုနှဈယောကျ အတှကျ မှေးနေ့ ဆုမှနျကောငျး တောငျးပေး လိုကျတဲ့ သဇငျထူး မွငျ့
ပရိသတျရဲ့ အခဈြတျော သဇငျထူးမွငျ့နဲ့ အမွဲတတှဲတှဲတှမွေ့ငျရလရှေိ့တဲ့ အမွှာညီအဈကို နှဈယောကျ ကိုတော့ ပရိသတျကွီးသိကွလိမျ့မယျ ထငျပါတယျနျော။ သူတို့နှဈဦးကတော့ သဇငျထူးမွငျ့ တို့မောငျနှမနှဈယောကျနဲ့ အတူ Dream Do Create Page လေးဖှငျ့ပွီး ပြျောစရာဂိမျး အစီအစဉျတှနေဲ့ အခွားဗှီဒီယိုလေးတှေ ရိုကျကူးမြှဝလေကျြရှိပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ Twin Guys II It’s my Lifestyle Page လေးမှာလညျး ပညာပေးဗှီဒီယို လေးတှေ ရိုကျကူးကာ မြှဝလေကျြရှိပွီး အားပေးသူ ပရိသတျအခိုငျအမာ ရရှိထားပါတယျ။ ဒီနကေ့တော့ အမွှာညီအဈကိုနှဈယောကျရဲ့ မှေးနရေ့ကျမွတျလေးဖွဈပွီး သဲလေး ကတော့ ” Happy Birthday ကိုကွီးတို့ အမြားကွီး အောငျမွငျပါစေ…ဝိတျလညျး ခမြနပေါနဲ့…. အတူတူဝ ကွတာပေါ့…… ညီမလေး ဆုတောငျးပေးတယျနျော Happy Birthday … ကိုကွီးတို့ အမြားကွီး အောငျမွငျပါစေ…ဝိတျလညျး ခမြနပေါနဲ့… အတူတူဝကွတာ ပေါ့….ညီမလေးဆုတောငျးပေးတယျနျော ” ဆိုပွီး မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတောငျး ပေးခဲ့ပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ…
ဒီနေ့ ကရြောကျတဲ့ မှေးနရေ့ကျလေးကစပွီး ကိုယျဖနျတီးခပြွခငျြတဲ့ အနုပညာအလုပျတှကေို စိတျရှိတိုငျး လုပျနိုငျပွီး ပရိသတျအားပေးမှု အခိုငျအမာရရှိတဲ့ အနုပညာရှငျတှေ ဖွဈပါစလေို့ ဆယျလီကမ်ဘာမှ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျနျော။